Madaxweynaha Dawladda Puntland oo Ka Qayb Galay Shirka Amniga Qaranka – PuntlandNews24
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr.Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta 06 February 2018 Muqdisho uga qayb galay shirka amniga qaranka oo maanta ka furmay xarunta madaxtooyada Villa Soomaaliya, shirlkaas oo ay iyaguna ka soo qayb galeen Madaxda Dawladdaha xubnaha ka ah DFS Madaxweynaha Soomaaliya, Ra’iisal wasaaraha DF Somaaliya, taliyayaasha ciidamada qalabka sida iyo masuuliyiin kale.
Shirkaan oo ah kii saddexaad oo ay yeeshaan madaxda Dawladda DFS iyo Dawladdaha xubnaha ka ah, ayaa diiradda lagu saarayaa xaaladda Amniga Soomaaliya iyo sidii loo abuuri lahaa ciidan xoogan oo ka hawl gala Soomaaliya.
Dhinaca kale Shirka amniga qaranku waa madal ay ku kulmaan madaxda Dawladda Faderalka ah iyo Dawladdaha xubnaha ka ah, waxaa inta badan xoogga lagu saaraa arimaha amniga iyo xasilinta Soomaaliya, iyo sidoo kale qaabaynta siyaasadda Soomaaliya, iyo sidii dhabaha iyo nabadda hormarinta loogu ridi lahaa Soomaaliya.
Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo kulankii maanta ay yeesheen madaxda Dawladdaha xubanaha ka ah DFS iyo madaxda Dawladda Faderalka ah Soomaaliya ka jeediyey Khudbad taariikhi ayaa sheegay sidda ay mahuraanka u tahay in dhidibada loo taago ciidamada xooga dalka Soomaaliya, si lo adkeeyo amniga iyo xuduudaha Soomaaliya, isla markaana tilmaamay haddii la rabbo in la helo Soomaaliya Adag oo ah dal dhisan, xudduudihiisuna sugan yihiin, in ay l;agama maarmaan tahay in la dhiso hay’adaha kala duwan ee dawligga ah.
Sidoo kale Madaxweynaha Dawladda Puntland ayaa sheegay in madaxda qaranka Soomaaliya looga baahan yahay in si feejigan u abaaraan dhismaha ciiidamada qalabka sida ee Soomaaliya, iyagoo oo dadaal koodoo dhan isugu geynaya sidii shacabka Soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo nolol si ay u helaan kalsooni buuxda oo ay ku maareeyaan noloshooda.
Ugu danbayntii Madaxweynaha Dawladda Puntland Dr. Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa inta uu joogey Muqdisho wuxuu kulamo gaar gaar ah la qaadanayey Madaxda Dawladda DF Soomaaliya iyo madaxda Dawladdaha xubnaha ka ah DF isagoona kala hadlayey xaladda amniga somaaliya iyo sidii iskaashi buuxa looga samayn lahaa Hormarinta Soomaaliya.